RuneScape ngoku kwi-Android yakho: enye yeeklasikhi zeMMORPG ibuyile | I-Androidsis
IRuneScape yenye yeeMMORPGs (Umdlalo wabadlali abaninzi abaDlala ngokuDlala kwi-Intanethi) Ngubani owayesazi indlela yokulwa iWorld Warcraft, i-Ultima Online kunye ne-Everquest ekuqaleni kwenkulungwane. Le midlalo yokuqala enento yokudlala ephezulu ekuvumela ukuba udlale "indima" kwaye uqokelele iqela labahlobo kwisizalwane.
Kuninzi okwenzekileyo ukusukela ngezo ntsuku ukuze namhlanje sikwazi ukuthetha ngento yokuba iRuneScape ikhutshelwe kwiVenkile yeGoogle Play ukuze bonwabe abo bayidlalayo ngelo xesha. Kwaye ngaba namhlanje kukho abanye abadlali abaye ungaphezulu kweminyaka eli-13 ubudala, ke unokufumana umbono wefuthe lo mdlalo ngomhla walo.
1 Ukuhlengahlengiswa kweselfowuni kunye neqonga lomnqamlezo
2 IRuneScape yangaphambili yeyangoku
3 Ukuba ubudlale iRuneScape yangaphambili
Ukuhlengahlengiswa kweselfowuni kunye neqonga lomnqamlezo
Ngasemva kunemidlalo ye-SEGA, IJagex Games Studio iye yahamba ubude ekuziseni inguqulelo elungiselelwe ngokupheleleyo izixhobo zescreen. Ngamanye amagama, sithetha ngomdlalo onokuyonwabela ngokupheleleyo kwiselfowuni ukuzisa ngaphambili yonke into eyayithetha ngelo xesha.
Olunye uncedo lwalo, kwabo baneakhawunti kuhlobo lwayo lwePC, kukuba ungadlala nabahlobo bakho kwinto ebizwa ngokuba liqonga lomnqamlezo. Oko kukuthi, ukuba udlala umdlalo kwi-PC, uwushiye phi, unokuyilandela ukusuka kwinduduzo yokulala phantsi esofeni kunye smart. Eli linqaku elihle kubalandeli beRuneScape kwiPC yokutshintshela kuhlobo lwe-Android kwaye ngokuchaseneyo.
Kwaye ukudlala iRuneScape kwiselfowuni ye-Android iya kuba lelinye lamava okudlala ahlengahlengisiweyo ukuchukumisa izikrini. Kwaye kukodwa kungamava amahle ngaphandle kokulahla, into eyayisoloko inxulunyaniswa nohlobo lwePC. Sithetha ngokwenyani ngomdlalo ocacileyo ukusukela ngo-2017, nangona ngokusetyenziswa kwedatha, ukuba ucwangcisa ukudlala nge-4G, dubula nge-2MB ngeyure ...
IRuneScape yangaphambili yeyangoku
Kulabo kuni abangazange badlule kwihlabathi le-Intanethi leRuneScape, le yeyona MMORPG yokwenyani apho "Ihlabathi" lenziwe "ngabadlali balo cUmxholo abaphuhlisi abaphumeza rhoqo. Umxholo uvotelwe ngabalandeli ukuze udityaniswe kumcimbi weeveki okanye iinyanga.
Ngaphezulu Abadlali abazizigidi ezingama-260 badlulile eRuneScape ukusukela ngo-2001. Abadlali ababekwazi ukudlala njengabahloli abafuna uzuko, okanye badibane namanye amaqhawe ukwenza uphawu kumdlalo. Unokuba nezakhono ezingama-23 zokugxininisa kuzo, amakhulukhulu eentlanganiso kunye nohlaselo oluninzi kunye nabaphathi bokugqibela ukuze babasuse.
I-PvP nayo iyasilela kunye neepuzzle ezininzi ukusombulula kule mishini oya kuyifumana udikwe kwaye ufuna ukuyigqiba. I-MMORPG epheleleyo ngokupheleleyo eziziindaba ezimnandi kubo bonke abalandeli bayo abanokuthi ngoku babe nayo kwi-Android yabo.
Ukuba ubudlale iRuneScape yangaphambili
Ukuba kwelinye icala sele uyidlalile iRuneScape, Uya kuba noomatshini bemidlalo abafanayo, imizobo yeeprofayile ezisezantsi kwaye uya kudibana nazo zonke ii-NPC ezivela kwiidolophu oza kuzikhumbula. Kwakhona, zilungiselele umxholo omninzi omtsha ongezwe ukusukela ngo-2013.
Oko kuthethiweyo, kukho Imodeli yobhaliso ye-5,69 euro ngenyanga ukufikelela:
Imephu yehlabathi ethi Amaxesha ama-3 amakhulu ngokwandiswa.
Izakhono ezili-8 ezongezelelweyo.
Uninzi lwemishini eyongezelelweyo.
400 imingxunya eyongezelelweyo yeakhawunti yebhanki.
Y miko más.
RuneScape kukubuyela kwenye yeeMMORPGs zakudala kwi-Android yakho enomgangatho oxabisekileyo ngenxa yomxholo omkhulu onawo, uluntu olukhulu oluya kufumana ukuyidlala yonke imihla kunye nophuhliso lobuchwephesha oluhlangabezana ngokugqibeleleyo nokulindelweyo. Sele sitshilo ukuba ziyimizobo ukusuka kwiminyaka elishumi yokuqala yenkulungwane yama-XNUMX, kodwa ke, ukusuka kwelishumi.
Ke ngokue ngoku unokukhuphela iRuneScape kwaye wonwabele njengomntu omncinci zehlabathi elenziwe ngabadlali labadlali. Ubumnandi obukhoyo ukuba ubuthathe, kuxhomekeke kuwe ukuba udlale indima ethile okanye enye; njenge yenzeka ngeDolophu yaseSalem apho Kuya kufuneka uyazi kakuhle ukuba ungathatha njani inxaxheba.
Izibuko elihle elivela kwiPC
Umxholo ukonwabela iinyanga
Yonke into eyiRuneScape kwiselfowuni yakho
Isikolo esidala seRuneScape
Umthuthukisi: IJagex yeMidlalo ye Studio
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Intsomi yeMMORPG RuneScape ngoku iyafumaneka kwi-Android
IHalloween yayo !!